Arsenal OoTodobaadkaan Lasoo Wareegaysa Lisandro Martinez Iyo Gabriel Jesus
HomeSuuqa kala iibsigaArsenal ooTodobaadkaan lasoo Wareegaysa Lisandro Martinez iyo Gabriel Jesus
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ku rajo weyn tahay inay dhamaystirto heshiis laba jibaaran oo 70 milyan ginni ah oo ay kula soo wareegayso Lisandro Martinez iyo Gabriel Jesus todobaadka soo socda.
Gunners ayaa aad u aamusnayd suuqii xagaaga ilaa haatan waxana ay ku dhawaqday hal xiddig oo cusub iyada oo Marquinhos uu kaga soo biiray Sao Paulo lacag dhan 3 milyan oo gini.
Heshiiska FC Porto ee Fabio Vieira ayaa la isku afgartay, si kastaba ha ahaatee, Arsenal ayaa si fiican u xaqiijin karta saxiixa 22 jirkaan horaanta todobaadka soo socda isaga iyo Matt Turner ka dib markii uu dhamaystay tijaabada caafimaadka isla markaana uu u saxiixay heshiis shan sano ah.
Mohamed Elneny iyo Eddie Nketiah ayaa labadooduba naftooda u huray heshiisyo cusub, halka Alexandre Lacazette uu kaga tagay beeca xorta ah si uu ugu biiro Lyon, Mikel Arteta waa inuu kormeeraa qaar kale oo cusub oo cusub ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , kooxda ka dhisan Waqooyiga London ayaa laga yaabaa inay ku dhamaato 70 milyan ginni si ka xun isbuuca soo socda iyagoo rajeynaya inay dhameystiraan heshiisyada daafaca Ajax Martinez iyo weeraryahanka Manchester City Jesus.